ကား, Small Car ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Daihatsu Honda Mazda Mitsubishi Morris Garages Nissan Scion Suzuki Toyota Volkswagen
Root Category (626)
A/C: Front (298)
A/C: Rear (115)
Cassette Radio (298)
Grey Scion IQ 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်းပေါက...
Morris Garages MG6 2013(USD 35000)
Silver Morris Garages MG6 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် LSJW24G92CS064516) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ဘေးကင်းလုံ...
Morris Garages MG5 2014 (USD 26500)
Red Morris Garages MG5 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် LSJA14E93EG050758) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Morris Garages MG5 2014(USD 26500)
Purple Morris Garages MG5 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် LSJA14E92EG050797) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl white Honda Fit 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
Silver Honda Fit GK3 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Honda Fit 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝ...
Blue Honda Fit shuttle hybrid 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Honda Fit GP1 hybrid 2011
Black Honda Fit GP1 hybrid 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Black Honda Fit 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Blue Suzuki Swift 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Silver Toyota Vitz 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Suzuki Swift 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 176 ညှိနှိုင်း
Silver Honda Fit 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Pearl White Honda Fit 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 163 ညှိနှိုင်း
Yellow Honda Fit 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Black Honda Fit 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Blue Honda Fit 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်...
Pearl White Honda Fit 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Pearl White Daihatsu Mira 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Black Toyota Vitz 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Grey Mazda Demio 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Black Honda Fit 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Silver Suzuki Swift 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl White Toyota Vitz 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
အသေးစား လူစီး မော်တော် ယာဉ်များ
ရူပ်ထွေးနေတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာ တော်တော် အဆင်ပြေစေတဲ့ ကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်နေရာ အကျယ်ကြီး တွေမလိုဘူး။ ဆီစား သက်သာတယ် ။ အခုလက်ရှိ ပြည်တွင်း အခြေအနေနဲ့ အကိုက်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျတော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ လူစီး မော်တော်ယာဉ် အသေးစားလေး တွေကို ပိုတွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ အများဆုံး တွေ့ရတဲ့ အထဲမှာ တိုယိုတာ တံဆိပ်က ထိပ်ဆုံးကပါပဲ။
တံဆိပ်စုံ ဆိုဒ်စုံပါပဲ။ အထူးသဖြင့်တော့ ဂျပန်နိင်ငံက ထုတ်တဲ့ ကားကုမ္ပဏီတွေက ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပ၊ အင်္ဂလန်ကားတွေကိုလည်း တွေ့နိင်ပါသေးတယ်။ အများဆုံး စီးနေကြတာကတော့ တိုယိုတာထဲကဆိုလျှင် တိုယိုတာ ရာရစ် ၊ တိုယိုတာ ဗစ်၊ တိုယိုတာ ပတ်ဆို၊ တို့ရှိပါတယ်။ တစ်ခြားအနေနဲ့ ဟွန်ဒါဖက်ရှ်၊ ဆူဇူကီ ဆွိတ် တို့ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်နစ်ဆန်းလည်း ရှိပါသေးတယ်။ နစ်ဆန်းထဲကဆိုလျှင် ၆၆၀ စီစီ တောင်ရှိပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှိထဲက မစ်ဆူဘီရှီ ကွတ်တ်ကိုလည်း လူသုံးများတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အများစုကတော့ ၁၃၀၀ စီစီ ဆီစားသက်သာတဲ့ ကားတွေချည်းပါပဲ။ ထိုထဲမှာမှ ၁၀၀၀စီစီလည်း ရှိပါတယ်။ ၁၀၀၀ စီစီဆိုလျှင်တော့ ဆီစား လွန်စွာ သက်သာပေမဲ့လို့ ကား အင်ဂျင်ရုန်းအားက သေးတာမို့ ဟိုက်ဝေးတွေ အတွက် အဆင်မပြေနိင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၁၃၀၀ စီစီ နဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ရှိတဲ့ ကားတွေကို ကားသေးတွေထဲမှာ လူစီးများ၊ အသုံးပြုများ နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဇယ် ထဲကတော့ ကားသေးတွေကို သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်ကားတွေထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပ ကားအသေးစားတွေထဲမှာတော့ ဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေကို တွေ့နိင်ပါတယ်။ ဥပမာ- မီနီ ကော်ပါး ။ ဒီထဲမှာ ရှိတဲ့ အင်ဂျင်တွေက ၁၃၀၀ စီစီအင်ဂျင် လောက်ကနေ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၂၀၀၀ စီစီ အထိ ရှိပါတယ်။ တာဗို အင်ဂျင်တွေကို တွဲလျက်ပါလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၁၄၀၀ စီစီ ဖြစ်တဲ့ ဗြိတိန်ကား မီနီ ကော်ပါး
ဗြိတိန် မော်တော် ကော်ပို့ရေးရှင်းက ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ မီနီ ကား မျိုးနွယ်ဝင် ကားအသေးစား ဟာ ကားနေရာ ကို တတ်နိင်သမျှ ချုံးထားပြီး ကားရဲ့ နေရာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို လူစီးနေရာနဲ့ ပစ္စည်း တင်ရန် နောက်ခံတို့တွင် ထားရှိပေးထားတဲ့ ကားအသေးစားလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ လူငယ်လူရွယ်များ အကြိုက်များစေတဲ့ ပုံစံရှိပြီး အော်တို၊ မန်နျူယယ် ဂီယာ ဖြင့် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ် အင်ဂျင် ရရှိနိင်တဲ့ ကားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါး နှစ်ပေါက် ဖြစ်ပြီး ဂီယာ ၄ချက်၊ ၅ ချက်၊ ရွေးလို့ရပါတယ်။ကားဒီဇိုင်းက ပေါ့ပါး သေးသွယ် ဟန်ဖြင့် ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်၊ဆီစားကလည်း ၁၄၀၀ စီစီလောက်ကို ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်ဖြင့် ရွေးနိင်တာမို့ အဆင်ပြေလှကာ ၀ယ်စီးမယ်ဆိုလျှင် ၀ယ်စီးသင့်တဲ့ ကားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ တစ်ပတ်ရစ် မီနီကော်ပါး ဗြိတိန်ကားကို မော်ဒယ်အမြင့် ၂၀၁၂တွင် ကျပ်ငွေ သိန်း နှစ်ရာကျော်လောက်နဲ့ ရရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသွင်းများတဲ့ ကားရဲ့ အင်ဂျင်
၁၃၀၀ စီစီနဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ရှိတဲ့ ကားတွေအပေါ် ကွာခြားတဲ့ ဈေးနှုန်း တစ်ခုဖြင့် အခွန်ဆောင်ရမူကြောင့် ၁၃၀၀စီစီ ကားတွေကို ပိုပြီး သွင်းကြပါတယ်။ ၁၂၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ကားတွေလည်း ပါပါတယ်။ ထိုထဲမှာမှ ၂၀၀၈ မော်ဒယ်ထက်ကို သွင်းကြပါတယ်။ ဒါဆိုလျှင် အခွန်သွင်းရတာ သက်သာလို့ ကားဈေးကလည်း ပုံမှန်ထက် သက်သာပါတယ်။ 1350 CC အောက်ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို Model Year 2009 မှ 2012 အထိ တန်ဘိုး USD 5000 ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကာ 2013/2014 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း လျှောက်ထားရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးကွက် ခန့်မှန်းဈေးနှုန်း အချို့
ကားရဲ့ ကီလိုမီတာ၊ အနာအဆာ၊ လေလံ ဂရိတ် စတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကားဈေးတွေက ကွာပါတယ်။ ကျပ်သိန်း (၁၀၀) အောက်နဲ့ ထို ဈေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင် တိုယိုတာ ပတ်ဆိုနဲ့ ဆူဇူကီး တံဆိပ်တွေကို ရရှိနိင်ပြီး ကျပ်သိန်း ၁၂၀ နဲ့ ၁၅၀ ကြား လောက်ဆို ဟွန်ဒါ ဖက်ရှိ ဂရိတ် အမြင့်ကားနဲ့ တိုယိုတာ ရတ်တစ် တိုိ့ကို ရနိင်ပါတယ် ။ ဥရောပကားတွေထဲကဆိုလျှင် ကျပ်သိန်း (၂၀၀) ကျော်လောက် ဖြစ် ရရှိနိင်မှာ ပင်ဖြစ်ပါတယ်။